Zviri zvakajairika here kuti yakasimba mwenje yebasa mwenje kupisa panguva yekushandisa?
Kune akawanda mamiriro ezvinhu anogona kukonzera kuti bhatiri rive rinopisa Zvinokonzera kupisa zvinokonzerwa ne lithiamu bhatiri: 1. Kana iyo bhatiri voltage iri 0, iyo yekudzivirira yemukati yebhatiri inozove yakakura kwazvo, inopedza yakawanda yazvino kana uchiraja, uye kunyange iyo yazvino charger iri ...
Iwe unoziva iwo mana akakura tekinoroji zviyero zve LED kuputika-chiratidzo mwenje?
Iwe unoziva iwo mana akakura tekinoroji zviyero zve LED kuputika-chiratidzo mwenje? Irambi rekuputika-chiratidzo mwenje ndeimwe yemarambi ekuputika-chiratidzo. Nheyo yaro yakafanana neiya yemwenje usina kuputika. Musiyano ndewekuti sosi yechiedza inoshandiswa ndeye LED mwenje sosi, iyo inoreva kune lam ...
Nzira Yakakodzera Yekuisa yeEmergency Lights Kuchengetedza kwekumisikidza mwenje yekukurumidzira 1. Kutanga tanga waona panowanikwa bhokisi remagetsi nemarambi, wobva waamisa nenzira kwayo, uye gadzira tambo-mbiri uye shanu-epakati tambo dze urefu hwakaenzana. 2 ...
Kuchengetedza kwekumisikidza mwenje yekukurumidzira 1. Chekutanga, sarudza panowanikwa bhokisi remagetsi nemarambi, wobva waisa nenzira kwayo, uye gadzira tambo-mbiri uye shanu-epakati tambo dzehurefu hwakaenzana. 2.Shandisa wrench yakakwirisa kuvhura iro bhokisi remagetsi bhokisi ...
Yakatungamirwa kuputika-chiratidzo mafashama, mwenje mwenje, ekunze magetsi magetsi anewo basa rekushongedza nharaunda uye kushongedza nzvimbo. Mafashama emagetsi ekuputika-anopenya anotorwa kunze kwechimiro. Mafashama akatungamira ekuputika-chiratidzo mhando yezvinhu zvekuvhenekesa zvekunze zvinoshandiswa hou ...
Chii Chinokanganisa Hupenyu Hurefu hweL ED Kuputika-chiratidzo Mwenje?
Rambi rekuputika-chiratidzo chemwenje rudzi rwekuputika-chiratidzo chemwenje. Nheyo yaro yakafanana neiya yekuputika-chiratidzo rambi, kunze kwekuti iyo sosi yechiedza ndeye LED mwenje sosi, iyo inoreva mwenje ine akasiyana matanho chaiwo akatorwa kudzivirira iyo yakapoteredzwa guruva nharaunda uye gasi kubva ...
Maitiro ekunyatso sarudza kuputika-chiratidzo marambi, anotevera mapoinzi akakosha kwazvo!
Pamberi pemarambi-ekupupura asati aonekwa, makambani mazhinji akaisa marambi akajairwa. Nekuti mwenje dzakajairika dzaive dzisina zvakanaka zvekuratidzira, zvakakonzeresa tsaona dzefekitori kuitika kakawanda uye zvakakonzera kurasikirwa kukuru kubhizinesi. Iyo fekitori inowanzo ...